Ry vehivavy, azo atao ny miaina am-pahasambarana ireo dingam-piainanao rehetra – Blaogin'i Voniary
Matetika ny fianarana sy ny asa toa manaraka eny ihany ary vitavita ho azy eny ihany. Fa ny andavanandrom-piainan’ny vehivavy kosa dia miankina betsaka amin’ireo dingam-piainana lalovany araka ny lalàn’ny natiora, tsy inona izany fa ny mpitovo, ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana ary ny vady sady reny. Fifampizarana teo amin’ny vehivavy maromaro samy miaina ireo dingana ireo no hozaraiko aminao androany, tsy lesona fa traikefam-piainana.
Mpitovo aho, mahatsiaro sambatra aho
« Ny maha-mpitovo dia azo raisina ho toy ny dingana fiomanana amin’ny fiainan-tokantrano » Hoy i Gaelle. Fiomanana satria eo ianao no mianatra mitia sy mikarakara ny tenanao aloha mba afahanao manao toy izany amin’ny ankohonanao any aoriana. Ilay mitia ny tenanao mety ho sarotra indraindray indrindra raha mpijery ireny horonan-tsarimiaina an’i Disney ireny ianao. Ny maro amin’izy ireny manko dia mampanantena ny vehivavy fitiavana amin’ny fomba romantika sy manidintsidina ary mampanofinofy ilay andriandahy tsara tarehy sy tsara fanahy. Lavitra an’izany anefa ny zava-misy ary ny fitiavana tsy vitan’ny fitsetserana fotsiny.
Photo de Dennis Magati sur Pexels.com
Ary ny tena olana dia manatsatso, maneso, mandodona ny havana, ny namanan ny fiarahamonina manontolo mihitsy rehefa mihamahazo taona ny vehivavy nefa mbola mpitovo ihany. Eo indrindra no nilazan’i Gaelle hoe « ny ahy ialako ny fomba fijery mitsivalana fa mahasoa kokoa ny fomba fijery mitsangana ! ». Raha azavaina dia izao, ny fomba fijery mitsivalana dia ny fahitan’ny mpiara monina anao, izay olombelona ihany fa ny fomba fijery mitsangana kosa dia ny fandraisan’Andriamanitra mpahary anao. Hoy i Miray nanamafy izany hoe : « rehefa miankina amin’Andriamanitra dia mahatsapa hoe tiana mandrakariva na eo aza ny sedra maro lalovana ka izay no mahatonga ahy mahatsiaro sambatra ao anatin’ilay fiainana maha-mpitovo ».
Mitondra vohoka aho, vonona hiteraka ary mahatsiaro sambatra
Mitondra fiovana goavana lehibe eo amin’ny fiainan’ny andriambavilanitra ny fitondrana vohoka. Ankoatra ireo fiovana ara-boajanahary ara-batana sy ara-tsaina dia maro amintsika no miatrika olana fanampiny noho ny fitondrana vohoka aloha loatra, mbola tsy vita raharaha na tsy manam-bady mihitsy aza. « Kanefa zany rehetra izany tsy nahasakana iaina am pifaliana, hianoka ilay fahasambarana mahatsapa sy mahare fa ao an kibo ao ilay olona kely. » Hoy i Miharisoa.
Photo de Janko Ferlic sur Pexels.com
Tokony ho falifaly lalandava ny vehivavy mitondra rano, indrindra rehefa manomboka amin’ny faha-efa-bolana iny satria tsapan’ilay zaza ao an-kibo ny fihetseham-pony. Marina fa sarotra ny haneho fifaliana ranolava satria ny fotoana fitondrana vohoka mihitsy no maha-kizintina, mampiferinaina ary mandreraka izay tsy izy. Saingy, ezahina mba hahasalama ilay zaza ao an-kibo na ara-batana io na ara-tsaina dia ezahina mba ho hafaliana no betsaka indrindra tsapany. Aza adino ny miresaka aminy sy mihaino ny pelipelika keliny amin’ireny fotoana ireny fa mitondra fiadanana anaty. Ny fananana vady, mpiray tampo, ray aman-dreny na namana manohana ihany koa tena ilaina, indrindra ho an’ireo miatrika sedra manokana.
Vady sady reny aho ary mahatsiaro sambatra
« Ny lehilahy, lehilahy eny ihany ! » Hoy Govina. Izay aloha no mila ataontsika vehivavy an-tsaina voalohany. Efa nataon’Andriamanitra tsy mitovy mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy mba hifameno. Zava-boahary saro-takarina ihany indraindray ny lehilahy fa ny vehivavy tsirairay no mila mahafantatra ny toetram-badiny sy mifampiresaka aminy mba hisian’ny filaminana ao an-tokantrano. Misy ohatra ireo tsy miraika akory ny hiasa hamelona ny vady aman-janany fa mandany andro eo anoloan’ny fahitalavitra. Ao indray ireo mahita ketrika foana nefa hevitra taingina tsy misy mahomby akory. Misy koa ireo any am-piasana na manatanteraka iraka any amin’ny faritra lalandava. Ao ireo mamo lava, mamono vady sy mampirafy. Tsy adino koa anefa ireo mazoto manao raharaha sy manampy ny vadiny amin’ny fanaovan-tsakafo. Maro ireo maneho fitiavana ny vadiny amin’ny fanomezana kely indraindray na miaraka mivoaboaka toy ny fahiny.
Fa manoloana ireny lehilahy maditra ireny indrindra, tsara halaina ny hevitr’i Govina : « Efa nivoady tamin’ny tenako aho fa tsy hitomany izany na inona na inona mitranga indrindra noho ny lehilahy. Ny zanako, izay antom-pisiako sy loharanom-pifaliako ary ny asako, izay anehoako ny maha-izy ahy dia ampy mahasambatra ahy ! »
Na mifanaraka tahaka ny inona anefa ny mpivady, « tandra vadin-koditry ny fiainana ny olana ». Mety hisy ny olana ara-bola, ara-kasa, ara-piarahamonina sy ny maro hafa. Toy izao àry ny toro-hevitr’i Ando iatrehana ireny fiovana ireny : « mametraka laharam-pahamehana, mampita ireo andraikitra azonao apetraka amin’ireo olona azonao atokisana ary mahasahy manao tsia. Raha arakao io lamina io dia hirindra lalandava ny fiainana na misy fiovana tampoka aza ary hahatsiaro filaminana anaty ihany koa ianao ».
Ilaina tokoa ny fifanohanana eo amintsika samy vehivavy satria tsy mora ny fiainana atrehin’ny tsirairay. Izany indrindra no antony hanatanterahanay vehivavy mpinamana maromaro fihaonana indray mandeha isan-taona taloha fa ezahina hatao isan-telovolana amin’izao. Fihaonana hombana lohahevitra iray, misy fifampizarana ary fifanakalozan-kevitra. Mampitombo ny fifankahazoana am-po ny fihaonana tahaka ireny ary manome hery hiatrehana ny fiainana. Aza misalasala ary manao toy izany eo aminareo mpinamana, mpiara-mivavaka, mpiray monina, mpiara-miasa ary mpiray fikambanana.
empowerment gasy, fahaiza-miaina, fiadanam-po, fifankatiavana, fijery miabo, filaminana anaty, vehivavy malagasy, women empowerment